किन पुरुषलाई बिहान र महिलालाई राति सेक्स गर्ने चाहना बढी हुन्छ ? कारण जानिराखौं – Everest Dainik – News from Nepal
किन पुरुषलाई बिहान र महिलालाई राति सेक्स गर्ने चाहना बढी हुन्छ ? कारण जानिराखौं
सामान्यतः मानिसहरु यौनको बारेमा धेरै कुराकानी गर्न रुचाउँदैनन् । तर सुखद जीवनको लागि यौन जीवन पनि सुखद हुनु जरुरी छ । यसको लागि यौनका बारेमा एकअर्कामा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ ।
यो यसकारण पनि भइरहेको छ कि हामीलाई यौनको जैविक जानकारी कम छ। हामीमध्ये धेरैलाई सेक्स कतिबेला गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन